On amashalofu esitolo ungathola ushizi oluhlaza okwesibhakabhaka nophuzi ngokufaka imbewu yobunandi. Kuwu-fenugreek, okwenza umkhiqizo ube mnambitheka omnandi we-nutty.
I-Fenugreek iyisitshalo saminyaka yonke, imbewu yayo enezakhiwo ezinomakha omsongo. Ivela ngaphansi kwamanye amagama: isiGreki hay, shamballa, fenugreek, helba, chaman. Ikhula eMpumalanga Yurophu, ezintabeni zase-Asia Ephakathi, eTurkey, e-Iraq nase-Iran. Imbewu ayikhudlwana kune-4 mm ivuthwe kumapods. Banekhanda elimnandi, elithuthukiswa ngokukhethekile lapho ligosa. Lesi sitshalo ngokwawo sinomlilo obabayo obabayo obusanda kuhlwanyelwa.
Ngokusho kwezakhiwo zalo, i-fenugreek ifana ne-aphrodisiac. Izinto eziqukethwe imbewu yesitshalo, zibambe iqhaza ekukhiqizeni ama-hormone wesilisa abesilisa bese ukwandisa izinga le-testosterone egazini.
I-Fenugreek iqukethe amavithamini, ama-macro nama-microelements, okuvumela ukuba kusetshenziswe kabanzi embonini yezokwelapha, imithi yendabuko nokupheka.
Isicelo seFenugreek ekuphekeni
Imbewu ye-Fenugreek isetshenziselwa izinongo ezinomsoco kokubili ngokuzimela nangemixube ekhethekile (chutney, chaman, hops-suneli, curry). Lapho kuthengiswa, i-fenugreek (isisindo) ivame ukuhlinzekwa njenge-powder eyenziwe ngomumo.
Amahlumela amancane, amaqabunga nembewu yesitshalo asetshenziselwa ukulungiselela izitsha eziningi, ikakhulukazi ukudla kwaseMpumalanga. Banika ukudla kube mnandi, ukunambitheka kwe-nutty. Amaqabunga asomile futhi asetshenziselwa ukwenza "ushizi oluhlaza", okuye kwaba ukuphathwa okuthandayo kwezigidi zaseRussia iminyaka eminingi.
Ushizi oluhlaza nge-fenugreek
Amazwe amaningi aseYurophu, iFrance, i-Italy, iJalimane, eNetherlands, ngokukhethekile ekwenzeni ushizi. Baze bazihlanganisa nezinhlobo ezithile ze ushizi. ISwitzerland ayikude kakhulu nalawa mazwe. Kulapha ukuthi ushizi we-Shabziger wangempela uyenziwe.
Ubuchwepheshe bokukhiqiza kwawo buhlukile ngendlela yendabuko. Ukupheka, sebenzisa ubisi kuphela obuswe, obonge utshani obomile - u-blue fenugreek. Ngemuva kwalokho, isisindo sishisa ukushisa okuthile (90 degrees) kanye ne-citric acid noma i-acetic acid. Ngenxa yokubumba ubisi, i-whey yakha, okuyisisekelo sokulungiselela ushizi. Kuthululelwa emafomu akhethekile, lapho kugcinwa cishe isonto. Khona-ke imisiwe futhi kule ndawo ishiywe isikhathi sezinyanga ezimbili kuya kwezingu-6 ukuze kutholakale ukuvuthwa.
Ngenxa yobuntshani, ushizi ophethe i-fenugreek Shabciger uthola umbala ohlaza okwejwayelekile, ukunambitheka kwe-nutty nokuvutha okuqinile. Libhekisela ezinhlobonhlobo ezinzima ezivutshiwe. Iqukethe ikhalori ephansi ngokuqhathaniswa nezinyosi zendabuko (137 kcal), ubuncane bamafutha (1 g) nesamba esikhulu samaprotheni (33 g). Akuqukethe ama-carbohydrates ne-lactose, ngakho-ke lo mkhiqizo ubisi omuncu awuyona nje okumnandi, kodwa futhi uyasiza kakhulu. Lapho ubuchwepheshe bokukhiqiza buguquka, okuqukethwe kwamafutha nokuqukethwe kwekhalori we-ushizi kungakhula kakhulu.
Ushizi nge-fenugreek: izakhiwo eziwusizo
Ushizi onzima nge-fenugreek uthengiswa kumakhanda azungeze amasiko, ngefomu elijatshiwe neliphuzi. Ngakho-ke yengezwa ku-omelet ne-pasta, esetshenziselwa ukupheka amasoso kanye nokupheka isinkwa. Lo mkhiqizo obisi omuncu uhlanganisa ngokuphelele izindawo eziwusizo ze-shizi kanye ne-fenugreek. Iqukethe amavithamini A, C, E, PP neqembu B, amaminerali (zinc, iron, calcium, magnesium, ithusi, potassium, phosphorus, sodium).
Ushizi nge-fenugreek unenani eliphakeme lokudla okunomsoco. Icebile amaprotheni, ngakho-ke kuyasiza abagijimi abazuza imisipha yomzimba, kanye nezingane zokukhula kanye nempilo yamathambo, kanye nabantu asebekhulile abanempilo enhle.
Izimila zaseBelarusian nge fenugreek: izinhlobo
Ushizi ngokungezwa kwe-fenugreek akulungiseleli nje kuphela ezweni lakubo, eSwitzerland, kodwa nakwamanye amazwe. Ngokunambitha, i-Belarusian ushizi "i-Armel" nge-fenugreek ayikho ngaphansi kweyokuqala.
Akayena onamandla kakhulu, kodwa okubabayo ngokulinganisela, ngomthunzi okhanyayo, ongabonakali womunyu. Yenziwe ubisi olujwayelekile, ngakho okuqukethwe kwamafutha nokuqukethwe kwekhalori we-ushizi okunjalo kuphakeme kunalokho okwenziwe ushizi wangempela oluhlaza. Lona umkhiqizo wobisi ovuthayo otholile obala obala obala okwesibhakabhaka kanye nokwengezwa kwembewu yeziqholo ze-fenugreek. Ukunambitheka kuhle kuhlangene newayini elimhlophe.
Omunye ushizi waseBelarusian ophethe i-fenugreek "i-Alpental" ukhumbuza ikhwalithi yabathandekayo "i-Armel". Iphunga elimnandi, elincane ngokumuncu, ngokunambitheka okumnandi okomuncu. Ushizi "i-Alpental" luphuzi ngokuhluma okukhanyayo kwezinhlamvu ze-fenugreek.
Indlela yokwenza ushizi ngezinhlamvu ze-fenugreek ekhaya
Ukuze ukhiqize ushizi ngokunambitheka komunyu owodwa, udinga u-1 kg we-cottage ushizi (9-18%), ilitha lebisi elincandisiwe, amaqanda amathathu, ibhotela, usawoti, isoda kanye nesithako esikhulu - imbewu ye-fenugreek.
Okokuqala, i-cottage shizi idinga ukuhlanganiswa nobisi, ixutshwe kahle futhi ifakwe emlilweni omncane wokushisa. Qiniseka ukuthi ubukhulu abubilisi. Ngemva kwesikhashana, ubisi luzoqala ukugoqa. Umswakama obangelwayo ungaphonswa emuva ku-cheesecloth, ukhiphe i-serum. Ngemuva kwehora elilodwa i-cottage cheese eyomile izobe isilungele.
Manje kufanele idluliselwe epanini ngezingubo ezingenamathela, engeza amaqanda, amathisipuni amabili kasawoti, i-soda esiqongweni sommese, imbewu ye-fenugreek nebhotela (100 g). Gcoba kahle futhi ubeke endaweni encane. Ngokushesha u-mass uqala ukuncibilika futhi uzofana noshizi oshisayo ushicikile ushizi. Ungakhohlwa ukuqhuma njalo okuqukethwe kwe-pan. Lapho ubukhulu buba yinto efanayo, kungathululelwa engumbumbeni wokupholisa. Emva kwamahora angu-12 ushizi lungathathwa. Ngeke kube mnandi njengokweshizi kanzima esitolo, kodwa akukho okuncane okumnandi futhi okuwusizo.
Amafomu okupheka amaqanda ngaphandle kwegobolondo ayatholakala futhi kulula ukuyisebenzisa
I-safari - kuyini? Properties, application kanye nokutshala isiphuzo esinomsoco
Imbewu yeSesame: inzuzo nokulimala, ukwakheka nokusebenza
Indlela yokusebenzisa izintambo ze-sinamoni: amathiphu, zokupheka
Nawat - ushukela wezempilo
Iresiphi elula: ezomisiwe
Izinhlobo ezinkulu imibuzo ngesiNgisi
Nizhniy Novgorod. Metro wangenela ngaphesheya komfula
Bar kanye psi - ingcindezi kule amasondo. Silinganiso kanye nekusebentisa translation amagugu
Indlela ngamunye e ukuqeqeshwa nokufundiswa kwezingane
Uyini lo mkhuba? Incazelo kanye Izinhlobo
Tabasaranskiy ngezandla ukhaphethi: isithombe
Usuku Asebekhulile - umndeni iholide nogogo nomkhulu
Nini futhi kanjani ukudicilela ammonia umnsalo
Iziphi izinzuzo ifakwa ukuze Veterans zomsebenzi: nendlela yokuba sobudala zomsebenzi